Idizayini yangokwezifiso emaceleni amabili e-3D Die Casting Antique Copper Coin Badge for Souvenir
Usayizi: cishe u-6cm
Plating umbala: ithusi lasendulo
Izici: i-3D emaceleni womabili
Inqubo Technique: udini, ufe ekubunjweni, wokucwebezelisa, Plating, QC, emaphaketheni.
Ubuciko inkomba: 3D die ekubunjweni, akukho koqweqwe lwawo
Izikhonkwane zoqweqwe oluthambile ngokwezifiso:
okwaziwa nangokuthi 'izikhonkwane zoqweqwe oluqanjiwe', amakhwalithi ensimbi ashaywayo agcwaliswe ngesandla soqweqwe lwawo. Yini ehlukanisa izikhonkwane zoqweqwe oluthambile indawo yohlenga koqweqwe oluthambile ingaphansi kunezindawo eziphakeme zensimbi ezizungezile.
Izikhonkwane ze-koqweqwe oluthambile zilungele izikhathi eziningi, kusuka kubunikazi bezinkampani nezikhumbuzo zokuya lapho kuya khona ukuqashelwa kwabasebenzi kanye nezikhonkwane zokuhweba kwethimba, ikakhulukazi uma unokwakheka okulula noma okulingene.
Singabantu abanolwazi umkhiqizi. Kumenywa iningi ezitifiketini ezibalulekile zemakethe yalo ye-Wholesale OEM / ODM China Hot Sale Sports Running Basketball Soccer Commemorated Medal Trophy Cup, Enensizakalo enhle nekhwalithi, nebhizinisi lokuhwebelana namanye amazwe elinomthetho nokuncintisana, okuzokwethenjelwa futhi kwamukelwe ngamakhasimende ayo futhi kudala injabulo kubasebenzi bayo.
Intengo ye-OEM / ODM Yezemidlalo yaseChina Isitolo esidayisa yonke impahla, Sineminyaka engaphezu kwengu-8 yesipiliyoni kulo mkhakha futhi sinegama elihle kulo mkhakha. Izixazululo zethu zithole udumo kumakhasimende emhlabeni jikelele. Inhloso yethu ukusiza amakhasimende abone izinhloso zawo. Besilokhu senza imizamo emikhulu yokufeza lesi simo sokuwina futhi sikwamukela ngobuqotho ukuthi usijoyine.
Langaphambilini I-Zinc Alloy Die Casting Antique Silver Isikhumbuzo Semali Yokwakhiwa Kwe-3D
Olandelayo: 2D 3D Metal Indondo Ngokwezifiso Made in China
I-Chain Brooch Lapel Pin
Izikhonkwane ze-Enamel Brooch
Abakhiqizi be-Enamel Pin
I-Heart Pin Badge
Custom Commander S Coin Igolide Plated Koqweqwe Lwa Soft ...
Emaceleni Double Custom Design Soft Koqweqwe Lwawo An An ...
Emaceleni Amabili ngokwezifiso Design Metal Ibheji Soft Ena ...
Zinc Ingxubevange Die Ekubunjweni Antique Isikhumbuzo Mememora ...
Double-emaceleni Metal zemali Zinc Ingxubevange Made P Dual ...
Embossment emaceleni omabili I-antique Nickel Souvenir ...